America speaks: Hawaii is officially the best US state | USA News
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » USA Akụkọ Akụkọ » America na-ekwu okwu: Hawaii bụ eze steeti US kachasị mma
America na-ekwu okwu: Hawaii bụ eze steeti US kachasị mma
Ndị America na-akwụ ụgwọ steeti US niile kachasị mma
Hawaii, nke a maara nke ọma maka osimiri mara mma na ihu igwe ọkụ, weere ọnọdụ mbụ
Colorado nwere ugwu ndị mara mma, ụzọ njem njem, na ụlọ ọrụ wii wii na ntụrụndụ, Colorado nọ n'ọnọdụ nke abụọ
Ala abụọ dị ọnụ ala karịa bụ Alabama na Mississippi
Onu ogugu enweghi onu ogugu nke United States na-ekwu: ma ha bu ebe kacha mma ibi, ebe kacha mma ichoro ahia, ha nwere a theyuri. Ndị ọkà mmụta akụ na ụba, ụlọ ọrụ, na ndị nta akụkọ na-eme mkpebi dị otú a - mana gịnị ka ndị America n'onwe ha na-eche?
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gwara ndị mmadụ ka ha họrọ nke kacha mma n'ime steeti abụọ na usoro egwuregwu isi na isi. A na-enyocha steeti dabere na "mmeri mmeri" ha, ya bụ: oge ​​ole steeti ahụ meriri isi na isi mgbe ọ bụ otu n'ime steeti abụọ egosipụtara.
E gosipụtara steeti iri ise niile, na mgbakwunye na Washington, DC, mana mpaghara adịghị.
Hawaii, nke a maara nke ọma maka osimiri mara mma na ihu igwe na-ekpo ọkụ, buru ụzọ kachasị elu site na mmeri 69% nke egwuregwu ya. Na ugwu ya mara mma, ụzọ njem njem, na ụlọ ọrụ wii wii na ntụrụndụ, Colorado were nke abụọ na 65% nke egwuregwu meriri.
Ọnọdụ steeti nke atọ bụ Virginia (64%), ebe njedebe maka akụkọ ihe mere eme America na oke osimiri. Nevada, ụlọ nke Las Vegas, rutere na ebe nke anọ kachasị amasị (61%), na North Carolina naanị n'akụkụ ya n'azụ (61%).
N'iso ndị isi ise, Florida jiri nsonye 61% merie ebe nke isii. Ebe ezumike nká ọzọ, Arizona, meriri 60% nke egwuregwu ya iji were nke asaa. New York - ebe maka Broadway, nri dị mma, na ọdịbendị obodo ahụ - rutere n'ọnọdụ nke asatọ (59%). Ebe abụọ ọzọ maka ihu igwe na-ekpo ọkụ na oke osimiri gbara ebe nke itoolu na nke iri, n'otu n'otu: Georgia (58%) na Texas (58%).
Obodo America kachasị ama
Ala abụọ dị ala kachasị dị ala bụ Alabama (38%) na Mississippi (38%), bụ ndị na-adịkarị ala na nyocha ndị ọzọ nke ego na ịnweta nlekọta ahụike. Ha abụọ bụ ndịda Steeti, na ọ fọrọ nke nta ka ala iri niile dị na South, yana Arkansas (39%) na Kentucky (42%) sonyere Alabama na Mississippi nso na ala, ma ọ bụ Midwest, gụnyere Iowa (39% ), Indiana (40%), South Dakota (40%), Missouri (42%), na Kansas (42%).
Naanị otu bụ New Jersey, nke na-abịa nke atọ site na ala na 39%. Ọ bụ ezie na ndị na-ede akwụkwọ enyeghị ọnọdụ maka nhọrọ ha, New Jersey na-abụkarị isi ọchị, gụnyere maka isi ya n'oge ụfọdụ ma ọ bụ maka ịbụ ebe amụrụ aha nke Jersey Shore.
Washington, DC, nke etinyekwara na nyocha ahụ, kachasị njọ niile, na-emeri naanị 35% nke egwuregwu ya. Ndị America nwere ike ịjụ nkewa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọ na - ekwu maka ya - ma ọ bụ nwee ike na - agbagha na ọ bụ, na izi ezi, ọ bụghị steeti (n'agbanyeghị mbọ ịgbanwe nke ahụ).
Ndị America kwadoro ala ha ma ọ bụ ebe obibi ha ugbu a
Tupu nyocha ahụ, a jụrụ ndị zaghachirinụ, sị: "N'agbanyeghị ebe ị bi ugbu a, kedụ steeti ị chere na ị si?" Ọzọkwa “N’agbanyeghi obodo i si, kedụ steeti ị bi ugbu a?” Ndị America họọrọ ala ha na obodo ha 77% nke oge egosiri, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu oge ha họpụtara ọnọdụ obibi ha ugbu a (79%).
Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị America na-akọ ugbu a na-ebi na steeti na-abụghị obodo ha. Ndi mmadu a hoputara obodo ha 70% nke oge, ndi mmadu bi n’obodo ha kwuru na o di nma na 81% nke egwuregwu.